अधिकांश संक्रमित लक्षणविहीन र विदेशबाट आएका - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News अधिकांश संक्रमित लक्षणविहीन र विदेशबाट आएका
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएकामध्ये ९९ प्रतिशत लक्षणविहीन रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, कुल संक्रमितमध्ये ९७ प्रतिशत विदेशबाट फर्किएका छन् । नेपालमा बिहीबारसम्म १६ हजार ५ सय ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १६ हजार ३ सय ६६ जनामा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन । संक्रमितमध्ये १६ हजार ३५ जना विदेशबाट आएका छन् ।
नेपालमा बिहीबारसम्म १६ हजार ५ सय ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १६ हजार ३ सय ६६ जनामा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन । संक्रमितमध्ये १६ हजार ३५ जना विदेशबाट आएका छन्
पिसिआर टेस्ट नै नगरी विदेशबाट रेस्क्यु फलाइटमार्फत सिधै आएका केही व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट आएकामध्ये ३५ प्रतिशतले मात्रै पिसिआर टेस्ट गरेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा ५ हजार ६ सय १२ जनाले मात्रै पिसिआर परीक्षण गरेर नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
यस्तै, १९ दिनको अवधिमा क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका ४९ हजार ५ सय ९७ जना क्वारेन्टिनबाट बाहिरिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार गत ११ असारमा क्वारेन्टिनमा ७४ हजार २२ जना रहेकामा बिहीवार घटेर २४ हजार ४ सय २५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १६ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ । बिहीबार थप १ सय ३९ जना उपचारपछि निको भएर फर्केका छन् । योसहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या ७ हजार ८ सय ९१ पुगेको छ ।
कुल संक्रमितमध्ये ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म २ लाख ७१ हजार १ सय ४५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । तर, भोजपुर, सोलुखुम्बु, धनकुटा, मुस्ताङ र हुम्ला संक्रमणमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण समुदायमा नफैलिएको बताएको छ ।
छैटौं कोराना संक्रमितको परिवारका सदस्यको ‘रिपोर्ट नेगेटिभ’
Editor-Picks नवीन शिशिर - April 5, 2020 0
बागलुङ । बागलुङमा पहिचान भएका दुई जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिको परिवारका सबै सदस्यको ‘रिपोर्ट नेगेटिभ’ अर्थात कोरोना संक्रमण नभएको...
भर्खरै विजय नेपाल - May 4, 2020 0
Not-to-be-missed दिनेश थापा - March 6, 2020 0